Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Costa Rica dia nanendry ny minisitry ny fizahantany vaovao
Gustavo Segura Sancho dia nanendry ny minisitry ny fizahantany vaovao an'i Costa Rica
Ny filohan'i Costa Rica, Andriamatoa Carlos Alvarado Quesada, dia nanendry an'i Gustavo Segura Sancho ho minisitry ny fizahantany vaovao amin'ny firenena ary filoha mpanatanteraka ny Birao fizahantany Costa Rica (TIC), manolo an'i María Amalia Revelo Raventós ho filohan'ny departemanta.
Gustavo Segura Sancho dia manana mari-pahaizana momba ny Toekarena avy amin'ny Oniversiten'i Costa Rica ary MBA amin'ny Fampandrosoana maharitra avy amin'ny INCAE Business School malaza. Ny asany matihanina dia ahitana traikefa be dia be amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina. Nandritra ny indostrian'ny hotely dia nandany fito taona izy ary enin-taona koa tamin'ny naha-mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny birao fizahan-tany Costa Rican (TIC), ny dimy amin'izy ireo dia ny filoha lefitra.
Noho ny zavatra lehibe niainany tamin'ny fizahan-tany maharitra, Segura Sancho dia mpilalao fototra amin'ny fampiharana ny taratasy fanamarinana ho an'ny fizahan-tany maharitra (CST) any Costa Rica. Ny CST dia manasokajy ireo orinasa mifototra amin'ny ambaratongam-pifanarahan'izy ireo amin'ny fampiharana maharitra - programa mpisava lalana natombok'i Costa Rica tamin'ny 1997 ary notohanan'ny World Tourism Organization (UNWTO).
Faritra telo mazava no laharam-pahamehan'ny Gustavo Segura Sancho amin'ny maha minisitry ny fizahantany azy: ny fiverenan'ireo sidina iraisam-pirenena miadana sy milamina; ny fampiharana fitaovana hanamorana ny fahasahiranana ara-bola ataon'ireo orinasam-pizahan-tany; ary ny fampiharana ny fepetra hamelomana ny toekarena.
“Voninahitra lehibe ny manompo an'i Costa Rica amin'ny maha Minisitry ny fizahantany vaovao azy, toerana izay misy andraikitra lehibe kokoa aza amin'izao fotoana izao noho ny toe-javatra sarotra ateraky ny COVID-19, areti-mandringana izay nanimba indrindra ny indostrian'ny fizahantany . Faniriako sy lahasa ho ahy ny hijanonan'i Costa Rica ho mpilalao fizahan-tany manerantany indrindra, ”hoy i Gustavo Segura Sancho.
Ilay minisitry ny fizahantany teo aloha, María Amalia Revelo Raventós, dia nanolotra ny toerany tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo noho ny antony ara-pahasalamana.
Zavatra valo tokony hodinihina alohan'ny manidina mandritra ny COVID-19